Il - Girna Maisonette
(77 okushiwo abanye)
Il-Qala, Gozo, Malta, i-Malta
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Richard
Njengoba ibekwe phakathi kwezindawo ezinhle ze-Gozitan, edolobheni elihle laseQala, uzothola le maisonette ethokomele eqinisekile ukuthi izokunikeza ukuhlala kwakho lowo mlingo owengeziwe. I-maisonette yakhiwe ngesitayela esivamile se-Gozitan esibonisa ngokuziqhenya itshe le-limestone elinemibala yoju elitholakala eziQhingini zaseMaltese futhi libamba ngaphakathi kuyo ifenisha yokhuni eyakhiwe kahle yasendaweni enikeza yonke indawo umuzwa we-rustic. Igcwele ukukhanya kwemvelo futhi ibukisa ngemibono emangalisayo yezindawo zasemaphandleni zaseGozitan
I-maisonette isendaweni ye-squarish, enomthelela esimweni esithokomele. Kunamakamelo okulala ama-2 ahlukene anekhabethe lezingubo eziyize / ideski kanye negumbi lokugezela elibanzi. Ikhishi nendawo yokuhlala inokukhanya okuningi kwemvelo ngenkathi ungajabulela isidlo sakho sakusihlwa ethafeni ngokubuka okuthandekayo kohlangothi lwezwe laseGozo.
4.92(77 okushiwo abanye)
4.92 · 77 okushiwo abanye
I-maisonette isendaweni eyi-de-sac, iyenza ithule kakhulu futhi ithule, ilungele ukuphumula! Ngaphandle nje komgwaqo umuntu angajabulela ukubukwa okumangalisayo kweziQhingi ezi-3 eziyinhloko eziqhingini kusukela e-Belle Vedere futhi endaweni efanayo kukhona indawo yokudlela egijima umndeni kanye ne-pizzeria enokubukwa okuhle. Yize itholakala emaphethelweni eQala, iphinde ibe seduze nendawo emaphakathi (uhambo lwemizuzu engu-10), lapho umuntu ethola inqwaba yezitolo, ezikwazi ukubhekelela izidingo zakho zansuku zonke. Kunezitolo ezi-2 ezilula, amathilomu kanye ne-Wine bar, izindawo zokudlela kanye nesonto lePherishi elakhiwe ngesitayela se-baroque. Imizuzu nje embalwa ukuya (10 min drive, 30 min walk), uzothola iHondoq Bay, igugu langempela labantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo futhi uma uthanda ukuhamba okunokuthula noma ukuqwala izintaba, indawo yasemaphandleni ngemuva kwefulethi izoba yinhle.
Siyatholakala ukuze sikusize wenze okungcono kakhulu ngeholide lakho ngakho zizwe ukhululekile ukusibuza noma imiphi imibuzo engakusiza ukuthi uhlele ukuhlala kwakho e-Gozo
Hlola ezinye izinketho ezise- Il-Qala, Gozo, Malta namaphethelo